Mobilicom kuti ipe Mobile Mission Management System yekutanga kuJapan - Emergency Live
Mobilicom kuti ipe Mobile Mission Management System yayo yekutanga kuJapan
Mobilicom Ltd., iyo yose inotungamirira-inotsvaga-inyanzvi yekugadzirisa zvinogadzirisa, ichapa Mobile Mission Management System, iyo iri chikamu cheMoliclicom's Holistic hurumende yemamiriro ekurwisana nenjodzi, paIDEF Japan 2018. Mobilicom's Mobile Mission Management system, iyo inowanikwa muJapan kwenguva yekutanga, inobatanidza uye inogadzirisa masvikiro uye maitiro, uye inopa maAerial neGround masangano ane unobatana Real-Time kugadzirisa kuziva.
Mobilicom's Mobile Mission Management system inokurudzira kuongorora uye kubudirira kuburikidza nekuita kuti kuunganidza uye kugovana kwehuwandu hwemashoko zvakadai sokufamba kwemapu, mavhidhiyo eHD, Data & Telemetry, kuwedzera kwechokwadi uye izwi. NeAkabatwa Kwechokwadi (AR) simba, urongwa hunoderedza mutoro webasa revanhu uye unoita kuti vashandi vakwanise kugona zvakajeka uye kusarudzwa kwezvinangwa zvakakosha chete. Yakasimba uye yakavimbika, Mobilicom's Mobile Mission Management system inobvumira kushanda kwakanaka pakati pemapoka ose ekushanda, sezvo inoita kuti vagovererana nyore nyore kubatana, nguva chaiyo yenguva. Pose, iyo inogadzira nzvimbo yakachengeteka yemapoka ose akasiyana ari kushanda panzvimbo ino uye inoita kuti zvinhu zvose zviite zvisarudzo zvichienderana nemifananidzo yakajeka uye yakajeka.
Zvakanaka kune Vokutanga nevanosangana nematambudziko, Mapurisa nemumoto wemhepo uye mahofisi epasi, Bhuku rekutarisa nekuchengetedza, Kurongeka kwekuchengetedzwa kwezvinhu uye kuchengetedzwa, Kurinda kweCôte nekutsvaga uye kuponesa, zvigadziriswa zvinogona kuiswa nyore nyore uye zviri munzvimbo dzezvikwata uye helicopter, pasi motokari, mamiriro emakamuri, uye pamahwendefa, maunhare ekukurukurirana uye mavhidhiyo emagetsi ezvitoro. Iko inotendera nguva yakareba kuwirirana pakati pezvinhu zvose uye Real-Time ruzivo rwekuratidzira runosanganisira Vhidhiyo yeVhidhiyo uye mapurisa anofambisa neAkawedzera maReality zvinhu. Zvinhu zvose zviri kubatanidza kushandisa imwecheteyo Real-Time ruzivo, zvichigadzira hutano hwakakwana hwevasarudzo uye nekuderedza mweya-crew kuwandisa.
Mr. Offer Herman, Mobilicom's VP kutengesa uye kutengesa: "Tinofara kutora chikamu paIDEF Japan, uye kupa Mobilicom's Mobile Mission Management System, iyo inogadzirisa hutano hwemamiriro ekurwisana nenjodzi, kwekutanga kuJapan. Mobilicom's Mobile Mission Management System inoderedza vashandi kuwandisa uye inoita kuti vashandi vakwanise kugona zvakajeka uye kushambadzira mahofisi, uye ndizvo zvakakosha pakununurwa kwenjodzi. Mazano aMobilicom ekutsvaga-mazano-ezvo kuendesa kune imwe neimwe uye purojekiti yehuwandu nehuwandu hwekugadziriswa, kuvimbika nekufamba mumusika, uye ini ndinokukoka vose kuti vauye uye vashanyire chimiro chedu kuIDEF Japan ".
VaHerman vachapa hurukuro pamusoro pe "Kubatana kwehutano hwemamiriro ezvinhu ekuyamura" pane musangano weIDEF. Hurukuro ichave musi weChishanu, August 30, pa15: 00. Vose vanogamuchirwa kupinda.
Sezvo nyika yose inotuma-inotsvaga-mazano ekugadzirisa mazano, Mobilicom inogadzira, inokurukura uye inotengesa zvigadziriswa zvemitambo inokosha uye yakasununguka pechirongwa chekukurukurirana kwevanhu pasina ruzivo rwekushandisa, kana kushandiswa, chero humwe hupfumi huripo. Zvigadzirwa zveMobilicom uye teknolojia yakagadzirirwa pane nzira itsva inobatanidza 4G kukurukurirana ne Mobile Mobile MESH technologies mukugadzirisa kubatana, neine mhando yezvigadzirwa zvemhuri zvakave zviri kutengeswa. Mobilicom inotanga muimba uye inotora zvizere zvinhu zvose nekuda kwekwanisiki yaro yakasiyana nedzimwe sarudzo, kusanganisira: 4G modem, MESH networking, mafirimu, HW & SW kushandiswa, pakati pevamwe. Inyanzvi iyi inotsigirwa nehurumende yepamutemo inobata uye kuziva-sei. Mobilicom inosimbisa hutano hwakanaka, hune simba uye hunochengetedzwa husingasviki apo vamwe vasingaiti. Yakasimbiswa mu2007 uye inogara muIsrael, Mobilicom limited Ltd. inoumbwa nemasangano maviri: yekutanga inhengo yebhizimisi yeMobilicom, ine mhinduro dzinoita kuti hurumende inotaurirana-inokosha muhurumende nemabhizimisi ehurumende pamwe nekushandiswa kwemahombekombe egungwa, gasi nesimba , HLS uye kuchengetedzwa kwevanhu vose, nemotokari dzisina kukodzera. Yechipiri ndiyo inonzi SkyHopper iyo inopihwa, muperekedzi wepasi rose wekupedzisira-kwekupedzisira hardware uye software zvinogadzirisa zvinoshandiswa mune zvebhizimisi uye zvemabhizimisi nedrontics sector. Nzira yeHoyHopper yakakwana inoita kuti vateereri vema drone nevatsigiri vebasa vafunge nezvezvinangwa zvavo zvebhizimisi kuburikidza nekuderedza nguva-kusvika-kutengesa, kuderedza kushandiswa kwemari uye kuwedzera mikana yekubudirira.
Asia pamusoro pemamiriro ekushandurwa kwemamiriro ekunze. Njodzi: Dambudziko reMatambudziko kuMalaysia
MEDEVAC muAsia - Kuita Kurapa Kwechiremba muVietnam
Ndeipi Ambulensi Yebhayisikoro Yakagadzirisa Shanduro Yekubatsira Kwokutanga Kwemaguta?
Vhiki yeRudzi Rutsvuku uye Red Crescent - Apo Rudo uye Kuzvitsaurira zvinokutungamirira kuti Ubudirire